Pocketbook Touch HD 3 Famerenana: Vidiny, endri-javatra ary fahatsapana | Ireo mpamaky rehetra
Nacho Morato | | mpamaky, mandany vola
Izahay dia nisedra ny PocketBook Touch HD 3, fitaovana iray te hifaninana amin'ireo mpivarotra tsara indrindra amin'ny 6 ″ . Tonga feno ny zava-drehetra izy io. Vakio hatrany dia ho hitanao ny fahitan'ny mpamaky anay.
Raha hiresaka mifanatrika amin'ny fitaovana efa napetraka toy ny Kindle Paperwhite sy ny Kobo Clara HD, ankoatry ny fampifanarahana ny kalitao amin'ny vidiny mitovy amin'izany, dia tsy maintsy manome zavatra hafa izy. Ary ny Touch HD 3 dia manome antsika fiasa maro ary ny antsipiriany izay na dia toa ilaina aza, ny marina dia rehefa manana azy ireo ianao dia ankasitrahana.
Alohan'ny hanombohako ny famakafakana dia te-hanome hevitra momba ny zavatra izay angatahin'izy ireo amiko foana avy eo. Ie. Afaka mihaino audiobooks ianao.
Mandeha ny lisitry ny toetra mampiavaka an'io fitaovana io izahay.
1 Vidio ny Touch HD 3
4 Fihetseham-po sy endrika ivelany
5 Rindrambaiko sy fiasa
5.3 Lahatsoratra ho an'ny lahateny
5.4 Lalao, naoty, fanaovana kajy ary kalandrie
5.5 Ecosystem sy fifandraisana
5.6 Vaovao RSS
6 Inona no tsy ao?
Vidio ny Touch HD 3
Mpamaky iray izay mijoro manoloana ny Kindle Paperwhite. Mety raha liana amin'ny fihainoana audiobooks ianao
Ny vidiny dia € 159
Fitaovana sy fampisehoana
6 Display E Ink® Carta ™ Display (1072 × 1448) 300 dpi
Jiro eo aloha + (SMARTlight)
Refy 161,3 x 108 x 8 mm
Efijery multi-mikasika Capacitive
Batterie 1500 mAh (Polymer Li-Ion).
Kapila mafy 16GB
Wi-Fi fifandraisana tsy misy tariby (802.11 b / g / n)
Fiarovana HZO ProtectionTM (IPX 7)
Vaovao RSS, Fanamarihana, Chess, Klondike, Scribble, Sudoku.
Mamaky endrika (PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM)
Fandaharam-peo MP3, M4B
Tena tsara ilay fampisehoana. Boaty baoritra kely henjana izay azo ampiasaina hitahirizana ilay fitaovana.
Na dia toa olana kely aza izany, ny antsipiriany kely amin'ny kalitao izay hitantsika hatramin'ny voalohany dia milaza betsaka momba ny marika iray.
Ao anaty boaty no hahitantsika ilay fitaovana. Tariby usb - miniusb amin'ny famandrihana ny fitaovana sy tariby mini-USB mankany jack ho an'ny ampahany audio manontolo.
Ny fahatsapana voalohany azoko rehefa nahita azy aho dia hoe kely izy kely loatra ho an'ny 6 ″ sy tsara tarehy. Tena tiako ny fisehony. Ny habe, ny mikasika ny loko, ireo zana-kazo kely ireo dia mahatonga azy ho kôkada.
Tiene bokotra ara-batana eo ambany. Ny voalohany mandeha mivantana amin'ny pejy fandraisana an'ny mpamaky, ny faharoa miverina, ny fahatelo mandroso ary ny faha-4 mba hanehoana ireo safidy fanamboarana na aiza na aiza misy antsika.
Ny bokotra an-trano dia tena ilaina rehefa somary very ianao ary maniry ny handeha haingana any amin'ny mari-toerana. Raha efa nandramako ny mpamaky dia efa nampiasaiko be. Ilaina koa ny bokotra fanaingoana, satria tsy mahazo aina kokoa ny mampiseho menus eo amin'ny efijery mikasika.
Tiako kokoa ny bokotra mandalo amin'ny sisiny. Io no nahazatra ahy nampiasa azy ireo ary hitako fa mahazo aina bebe kokoa izy angamba noho ny endrika sy ny fihazonan'ny boky. Ary izany dia teboka iray hafa tokony hotadidina.
Makà mpamaky mahafinaritra toy izany, miaraka amina boaty kely toy izany, dia tratra amin'ny vidin'ny fahafoizan-tena. Ny mipetraka tsy misy olana satria azontsika raisina avy any ambany io, fa raha manandrana mamaky eo am-pandriana ianao dia ho hitanao fa tsy dia tsotra izany. Ary ny fitaovana ananganana azy dia tsy manampy amin'ny fampitana filaminana ihany koa.
Rindrambaiko sy fiasa
Ny lisitry ny zavatra ampidirin'ny Touch HD 3 dia lava be ary te hanandrana ny zava-drehetra aho. Ny hany zavatra tsy mbola nosedraiko dia ny fiarovana ny rano hahita ilay IPX7 izay ahafahantsika milentika ao anaty rano.
Ny PocketBook dia manana rafitra fikirakirana miorina amin'ny Linux. Ary feno fonosana mahafinaritra be izy io. Ny tena mahaliana:
ÉIty dia mpamaky iray hihainoana Audiobooks. Na dia tsy hitanao aza ny seranan-tsakolaka dia tonga miaraka amin'ny adaptatera miniUSB mankany jack izay ahafahanao mampifandray headphones ary mankafy ireo boky am-peo efa mihalefy. Azonao atao ny mividy azy ireo any amin'ny toeran-kafa na amin'ny sehatra Pocketbook mihitsy, na dia tsy ampy aza ny katalaogy amin'ny teny Espaniôla, saingy azo antoka fa ho tonga izy io
Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny headphones tsy misy tariby amin'ny alàlan'ny fampifangaroana azy ireo amin'ny alàlan'ny Bluetooth ary amin'izay dia mankafiza ireo safidy audio rehetra tsy misy tariby.
Mitohy amin'ireo fiasa audio. Azontsika atao ny mampiasa ny mpamaky ho toy ny mpilalao audio teo alohan'ny fampidinana ireo rakitra izay tiantsika hohenoina.
Mazava ho azy, tsy afaka mihaino mozika ao aoriana ianao rehefa mamaky. Na mamaky, na milalao, na mihaino mozika, fa tsy zavatra maromaro miaraka.
Malahelo ny safidy rehetra aho hihainoana ireo podcast an'ny sehatra lehibe. Nahavita nanao an'io aho tamin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny browser. Azonao atao ny miditra amin'ny iVoox ohatra, misafidy ny toko amin'ny podcast ary henoy izany, fa raha misy ny vahaolana teratany ao amin'ilay mpamaky dia hahagaga.
Lahatsoratra ho an'ny lahateny
Izy io dia manana fampiasa lahatsoratra ho fitenenana, izay manova ireo endrika rehetra vakiny ho kabary. Azonao atao ny mandray epub, mobi, a pdf ary vakio aminao.
Tsara ny nanandramako azy tamin'ny fiteny 2, Anglisy ary Espaniôla ary na dia tsy manana cadence toy ny audiobook aza izy io dia mety ilaina amin'ny toe-javatra sasany na ho an'ireo olona manana olana ara-pahitana.
Lalao, naoty, fanaovana kajy ary kalandrie
Niaro foana aho fa ny ereader dia manana fampiasa mazava be. Izy io dia fitaovana manokana ho an'ny asa manokana. Izany no mahatonga azy io miasa tsara ary tsy misy ilana azy ny mampitaha azy amin'ny takelaka.
Mahita fampiasa isan-karazany isika, toy ny lalao isan-karazany ao anatin'izany ny lalao échec, solitaire ary sudoku, pad pad, calculatera ary kalandrie. Fa heveriko fa tsy misy mampiasa azy io amin'ny finday avo lenta ankehitriny. Raha ny fahitako azy dia izy ireo no mampiasa azy io mba hialana amin'ny detoxify fa tsy ho tototry ny antso an-tariby hatrany amin'ny telefaona.
Ecosystem sy fifandraisana
Izy io dia manana ekosistema manokana, fivarotana izay tafiditra ao amin'ny ebook, avy amin'ny toerana ahafahanao mividy ireo ebooks. Manana afampiharana ho an'ny Android sy iOS izay ahafahantsika manasongadina ny zava-drehetra.
Cloud. Manana habaka fitehirizana sasany ao amin'ny rahona izahay izay ampiasaina handrindrana ireo fitaovana rehetra nampifandraisinay tamin'ny kaontinay.
Dropbox, azontsika atao ny mampifandray ny kaonty Dropbox-nay amin'ny fitaovantsika hahafahana mamaky sy mitantana ebooks
Alefaso any amin'ny PocketBook izay mamela anao handefa rakitra amin'ny endrika rehetra vakin'ny mpamaky amin'ny alàlan'ny mailaka ary hiseho ao amin'ny mpamaky anay izany rehefa mifindra amin'ny alàlan'ny WIFI
Izy io dia manana mpamaky RSS, afaka manaraka ny fahan'ireo bilaogy mahaliana antsika izahay, saingy ny lahatsoratra dia vakiana amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny mpamaky ary tsy dia tiako loatra izany satria misy pejy izay tsy mavesatra loatra, mametraka singa hafahafa maro, sns.
Amin'izay fotoana izay tsy ahombiazan'ny fitaovana maro dia alefan'ny Touch HD 3 mora foana. Fanazavana amin'ny fanamiana sy Smartlight.
ihany koa mamela antsika hampitombo sy hampihena ny hamafin'ny jiro sy ny fahazavana amin'ny alàlan'ny ebook nefa tsy mahafoy ny famakiana. Ho an'ity dia mila atsofoka mitsivalana manerana ny efijery ny rantsan-tànanao. Raha ataontsika amin'ny ankavia dia hofehezintsika ny SMARTlight ary raha ataontsika amin'ny ankavanana ny jiro eo anoloana. Tena mahasoa ny marina.
Inona no tsy ao?
Mety ny tena tsy fahampiana dia ny tsy fisian'ny DS. Tsy misy slot ny karatra.
Ny zavatra iray ampiasaiko be dia be dia ny mandeha mivezivezy amin'ny Internet, mahita lahatsoratra momba ny hevitra, amin'ny tranokala, amin'ny gazety, magazine, sns ary mandefa izany any amin'ny mpamaky hamaky azy avy eo. Ao amin'ny Kindle dia azo atao amin'ny plugins maromaro alefa any Kindle, ao Kobo dia azontsika atao ny mampifanaraka an'ity votoaty ity amin'ny Pocket fa tsy nahita na inona na inona haka tahaka an'io fampiasa io ao amin'ny mpamaky PocketBook aho.
Marina fa misy ny vaovao RSS saingy tsy mitovy izy io, satria araka ny efa nolazainay dia misokatra amin'ny browser izy io ary satria tsy maintsy miditra anaty feed ianao mialoha, izay mety tsy hahaliana anao ny zava-drehetra sy ny soso-kevitro handefa izay tranonkala tianao ianao Mahaliana rehefa mahita azy ianao mba hahafahanao mamaky azy io am-pitoniana avy eo.
Farany bullshit. Tsy mbola nahita safidy aho hizarana ny tsipika ambany na ny hevitry ny boky amin'ny tambajotra sosialy. Tsy hoe hitako fa ilaina izany, tsy ampiasaiko fa fantatro fa maro ny mampiasa azy.
Ny fehin-kevitra dia hoe hividy iray aho ary hampiasa izany isan'andro isan'andro. Ary tsy milaza izany ho an'ny mpamaky maro aho. Nampiasako izany nandritra ny ora maro, nahatsapa ho mahazo aina bebe kokoa ary tsy nianjera na dia indray mandeha aza, na manana olana.
Araka ny efa nanamarihako nandritra ny famerenana, ny teboka malemy heveriko fa ny fihazonana rehefa mandry aho ary tsy afaka mandefa ahy ireo lahatsoratra avy amin'ny tranonkala rehefa namaky azy io taty aoriana (saingy io no fampiasa izay tsy ataon'ny olona maro).
Tsy manana slot microSD izy io ary zavatra izay mora ampiasaina foana ho an'ireo olona manana ny tranomboky ao amin'ity endrika ity.
Azoko mpamaky ho an'ny olona liana amin'ny audiobooks sy ny audio rehetra ao amin'ny mpamaky iray. Ary heveriko fa tokony hitrandraka bebe kokoa an'io lafiny io amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fahaizana mihaino sy manaraka podcast.
Mihetsika amin'ny vidiny lafo izy io raha ampitahaina amin'izay heverintsika ho fifaninanana, € 159 € raha oharina amin'ny 129 an'ny Paperwhite na Clara. Ary ny olona iray izay tsy manome lanja ny fanampiny rehetra ananany satria tsy mila azy ireo dia manana ny Kobo Libra amin'ny € 179. Ka hitako eo anelanelan'ny elanelam-potoana io.
Afaka mihaino AudioBooks sy mozika ianao
Volavola tsara tarehy
Fampiasana, lalao, fanaovana kajy maro sns.
Tsy manana SD
Mangeja rehefa mandry ianao
Marika tsy fantatra any Espana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » Pocketbook Touch HD 3 famerenana